Message ဆိုတာ ပေးချင်တာပေးလို့ရမလား | အံ့ဘုန်းမြတ်
Posted by ahuntphonemyat ⋅ October 9, 2008	⋅4Comments
Journalist.	View all posts by ahuntphonemyat »	« အချစ်ဆိုတာ အပြန်အလှန်ချစ်ကြမှ ကောင်းမှာပါ။
လူသားရဲ့သမိုင်းမှာ ငွေကြေးဆိုတာပေါ်ပေါက်လာကတည်းက လူသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာ ကျဆုံးခဲ့ပြီ။ »
Posted by ကေဂျွန် | October 9, 2008, 9:44 am ကိုအံ့ဘုန်းမြတ် ဘလော့ဂ်ကို ရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဆီဗုံးမတွေ့လို့ မရေးဖြစ်တာပါ။ :)
Posted by mmwp | October 16, 2008, 1:05 am wordpress theme မိုက်မိုက်လေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Justin Tadlock ရဲ့ themes တွေနဲ့ Blog oh! blog က themes တွေကို ကျွန်တော်တော့ အတော်သဘောကျတယ်။ :)
Posted by mmwp | October 16, 2008, 1:09 am လောကကြီးမှာ ကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ အနုပညာသည်တွေကလဲ တစိတ်တပိုင်းပေးလိုက်တဲ့ အမှန်တရားအချက်လက်လေးတွေဟာ ဥပမာပြောရရင် မီးလိုပေါ့ဗျာ သုံးစွဲသူပေါ်မူတည်ပြီး ကောင်းကျိူးဆိုးကျိူးတွေဖြစ်လာရတာဆိုတော့ …. တာဝန်ကတော့သုံးစွဲသူပေါ်မှာပဲလို့ယူဆပါတယ်
Posted by ယံယံ | December 23, 2008, 6:05 am LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...